Tsy nanaja ireo mpiara-mitolona : Nilaozan’ny mapar ny kianjan’ny 13 Mai -
AccueilRaharaham-pirenenaTsy nanaja ireo mpiara-mitolona : Nilaozan’ny mapar ny kianjan’ny 13 Mai
19/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitokona irery teny an-kianja toa ireny zaza tsy nisy mpiahy ireny ireo olona mpomba ireo depiote Mapar omaly. Tsy nipoitra teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai intsony mantsy izy ireo na dia nanome toky aza tamin’ny sabotsy teo fa tsy afaka ny hanajanona ilay tolona. Raha ny fandaharam-potoana nandritra ny tontolo andron’ny omaly io, dia fanohizana ilay fanangonan-tsonia ho fangatahana ny fanesorana ireo minisitra mbola naverina ao anatin’ny governemanta ankehitriny. Akory anefa ny hagagan’ireo mpomba ny Mapar fa tsy nisy depioten’ izy ireo intsony teny amin’ny lampihazo na dia tamingany iray aza omaly. Tsy nisy rahateo ny fampilazana, na ny resaka nifanaovan’izy ireo tamin’ireo mpitolona momba ity famaranany ny tolona ity nandritra ny fihaonana farany. Maro araka izany ireo tezitra satria nahatsiaro nofitahina nanoloana ity fihetsika feno tsy fanajana nataon’ireo depiote Mapar. Tao kosa anefa ireo efa nanam-po izao zava-nitranga izao. Efa hatrany am-boalohany mantsy no fantatra fa ho sarotra ho an’ireto depiote ireto ny hamarana ny fiakarana teny an-kianja izay notarihiny. Efa fantatra fa ny fitsoahana an-daharana ihany no fomba mety indrindra, amin’izay ireo tratra farany no mizaka ny vokatry ny fahatezeran’ireo vahoaka nanaiky notarihina teny an-kianja.
Tsy niala fa dia mbola niakatra kianja kosa ireo depiote Tim, ary nanentana ireo mpitolona ny hanohy izany tolona izany. Ny Tim izay efa te hiala ihany koa, saingy mbola tsy nahita hevitra mahomby hijanonana. Voatery mitarika eny aloha araka izany ry Depiote Hanitra Razafimanantsoa sy ny ekipany amin’izao fotoana izao. Tsy mahagaga araka izany raha toa ka tsy dia misy ventiny loatra intsony ny fanentanana ataon’ireto depiote Tim ireto eny an-kianja taorian’ny fanjavonan’ireo namany Mapar. Voafitaka ihany koa ireo vahoaka any amin’ny faritra, satria araka izao zava-misy izao dia efa tsy ry zareo depiote miisa 73 intsony no mitarika ny tolona sy ny fitokonana eny an-kianja, fa efa ambany lavitra noho izany ny isan’izy ireo ankehitriny. Ireo vahoaka any amin’ny faritra izay mbola milaza ho manohana ny hetsika ataon’ireo depiote miisa 73 hatramin’ny androany. Raha izao fandehan’ny tantara izao no fakafakaina, dia tsy hisy mpitarika intsony ireo olona eny an-kianja satria hanjavona tsirairay ireo depiote namaky sehatra.